သင်၏သူငယ်ချင်းများသည်သင် UNI တွင်အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းများဖြစ်သည် - သတင်း
သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည်သင် uni တွင်အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းများဖြစ်သည်
သင်၏အိမ်သူအိမ်သားများသည် uni ၌သင်ပထမဆုံးတွေ့ဆုံဖူးသူများဖြစ်ပြီးသင်အားလုံးသည်အဝတ်လျှော်စက်ကိုမည်သို့ဖွင့်ရမည်ကိုတွက်ဆ။ ဟန်ချက်ညီစွာမှီဝဲရင်းမျှမျှတတသောအစားအစာကိုစားသုံးခြင်းထက်ပိုမိုပါဝင်သည်။
ပထမပတ်အပြီးတွင် Pete နောက်တံခါးသည်သင်၏ BFFL ဖြစ်သည်ကိုသင်ယုံကြည်သည်။ သင်သည်သင်၏ကြမ်းပြင်ပေါ်ရှိအခြားလူ ၁၀ ဦး နှင့်နောက်နှစ်အတွက်အိမ်တစ်လုံးကိုစာချုပ်ချုပ်ပြီးဖြစ်သည်။ ကညများပဲဖြစ်ဖြစ် Park Bar သို့သွားပြီးမြို့ထဲသို့လှည့်လည်သွားပါ။ ပထမနှစ်ပတ်အတွင်းသူတို့သည်သင်၏အသင်းသစ်ဖြစ်သည်။
သင်တို့ရှိသမျှသည်ညာဘက်, ကောင်းစွာအပေါ်ရ? မှား သင်၏အဖော်များကသင်ကျောင်းတွင်သင်ရရှိမည့်အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းများဖြစ်သောသင်၏သင်တန်းများတွင်လုံးဝမပါရှိပါ။ ငါတို့ပထမ ဦး ဆုံးတက္ကသိုလ်မှာပထမ ဦး ဆုံးဟောပြောပွဲ, ဟောပြောပွဲပြဇာတ်ရုံထဲသို့ဝင်ခြင်းနှင့်သင်အရင်ကမတွေ့ဖူးဘူးသောဤကျပန်းမျက်နှာများကိုမြင်လျှင်။ တစ်ညအိပ်ပြီးနောက်သင်နှင့်များသောမိတ်ဆွေဖြစ်လာခဲ့သည့်သင်၏အဖော်များနှင့်မတူသည်မှာသင်၏လမ်းပေါ်ရှိလူများအားမိတ်ဖွဲ့ရန်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကြာနိုင်သည်။
ဤအကျွမ်းတဝင်အသစ်များသည်ရက်သတ္တပတ်၏နေ့စဉ်နီးပါးတူညီသောသင်ခန်းစာများ၊ နှီးနှောဖလှယ်ပွဲများနှင့်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများတွင်ဖြစ်လိမ့်မည်။ သင်၏အချိန်အများစုကိုသူတို့နှင့်အတူအသုံးပြုကြောင်းသင်မကြာမီသင်သဘောပေါက်လာသည်။ သင်နှင့်အတူနေထိုင်သောသူများသည်ခြားနားသောသင်တန်းတစ်ခုကိုပြုလုပ်ပါကညနေတွင်သူတို့ကိုနှေးကွေးစွာမြင်တွေ့နိုင်မည်မှာအခွင့်အလမ်းသာဖြစ်သည်။ သင်၏ဆေးဆိုင်သူငယ်ချင်းများသိမ်းယူလိုက်သည်နှင့်တစ်ချိန်ကတင်းကျပ်စွာစည်းစည်းထားသောခန်းမများအသိုင်းအဝိုင်းပြိုကွဲသွားသည်။
သင်တန်းသည်စာမေးပွဲများနှင့်ပတ်သတ်ပြီးအစပြုလိုက်သည်နှင့်၊ Flirt တိုင်းတွင်သင်တက်နိုင်သည့်နေ့ရက်များမရှိတော့ပါ! ဗုဒ္ဓဟူးနေ့သို့မဟုတ် MNQ ညတိုင်းဖြစ်သည်။ သငျသညျတွေ့ဆုံရန်ပိုပြီးသတ်မှတ်ရက်ပိုမိုခက်ခဲသင်တန်းနှင့်ခြုံငုံလျော့နည်းအခမဲ့အချိန်ရပါလိမ့်မယ်။ နောက်ဆုံး၌စာကြည့်တိုက်သည်သင်၏ဒုတိယအိမ်ဖြစ်လာပြီးညနှောင်းပိုင်းတွင်ပြုလုပ်သောအစည်းအဝေးများသည်မကြာခဏဖြစ်လာပြီးသင်၏တိုက်ခန်းသို့မဟုတ်အိမ်တွင်လျော့နည်းသွားသည့်အချိန်ဖြုန်းလာသည်။ အထူးသဖြင့်သင့်တွင်အုပ်စုလိုက်တွေ့ဆုံရန်တာဝန်ရှိပါကဤမလိုလားအပ်သောလည်ပတ်မှုများအတွက်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်တွေ့ဆုံလိမ့်မည်။
သင်သွားနေစဉ်နာကျင်မှုကိုနားလည်သောသူတို့၏နွေးထွေးသောလက်ခံမှုကိုသင့်အဖော်များအားရှောင်ရှားပါလိမ့်မည်။ ၎င်းသည် WhatsApp မှဖြစ်စေ၊ လူကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေဖြစ်စေသူတို့သည်သင်၏မေးမြန်းမှုကိုကူညီရန်လိုအပ်ပြီးလိုအပ်သည့်အချိန်တွင်များစွာအကျိုးရှိသည်။
ပြmနာကိုအခြေခံသည့်သင်ယူခြင်းသည်သင်၏အဖော်များနှင့်သင်၏ဆက်ဆံရေးကိုပြိုကွဲစေမည့်နောက်ထပ်အတားအဆီးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤစီမံကိန်း၏ရလဒ်သည်နှစ်ကုန်တွင်သင်၏ရလဒ်များကိုအထောက်အကူပြုသောကြောင့်သင်၏အုပ်စုနှင့်အတူပေါင်းသင်းခြင်းသည်အထူးသဖြင့်၎င်းတို့သည်နောက်နှစ်များတွင်အတူတူအဖွဲ့ထဲ၌ရှိနေလျှင်ဖြစ်သည် သင်မသိကျွမ်းဖူးသူနှင့်ယခင်ကမသိခဲ့ဖူးသူပင်လျှင်ရေရှည်တွင်သင်၏အိမ်ထောင်ဖက်အသစ်ဖြစ်လာနိုင်သည်။
အကယ်၍ သင်သည်ပထမနှစ်တွင်ပြောင်းရွှေ့ရန်ရွေးချယ်ပါကသင်၏သင်တန်းတွင်ပါ ၀ င်သူများနှင့်သင်၏အချိန်အားလုံးနီးပါးကုန်ဆုံးမည်မှာသေချာသည်။ သင်၏နေ့ရက်သည် uni သို့လာခြင်း၊ ဟောပြောပွဲများတက်ရောက်ခြင်း၊ စားရန်နှင့်အိမ်သို့ပြန်လာခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ သင်တန်းများ မှလွဲ၍ အခြားကျောင်းသားများနှင့်အတူတကွလည်ပတ်ရသောအချိန်ကိုလျှော့ချပြီး Sakura ရှိအဆင်မပြေသောပြန်လည်ဆုံဆည်းမှုသို့ဖြည်းဖြည်းချင်းလျှော့ချလိမ့်မည်။
သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည်သင်၏ဘွဲ့၏အတက်အကျကိုကျော်လွှားရန်အာမခံချက်ရှိသည်။ သူတို့သည်သင့်အားအဖော်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်။ မရနိုင်ပါ။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှသင့်ကိုတစ်ခါတစ်ရံ ပို၍ တစ်ခါတစ်ရံတွင်သင့်ကိုတစ်သမတ်တည်းတွေ့နိုင်လိမ့်မည်။ ဇန်နဝါရီလလာပါ၊ စောစောစော။ သင့်အိမ်သို့လက်မှတ်ထိုးလိုက်သည့်အတွက်နောင်တရပြီး၊ သင်ခန်းစာပိုင့်စာသားများကိုအခြားအသင်းထက်ပိုပြီးလိုချင်လိမ့်မည်။